Home Wararka Xiisad colaadeed oo maaanta ka jira Magaalada Gaalkacyo
Xiisad colaadeed oo maaanta ka jira Magaalada Gaalkacyo
Xiisad ayaa maanta ka taagan Koofurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, halkaasi oo uu ku sugan yahay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo arrimo ku aadan Doorashada u jooga magaalada.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Madaxweyne Qoorqoor uu doonayo in uu boobo kuraasta taalla magaalada Gaalkacyo, taasina ay keentay in ay kacaan shacabka.
Mr Fiqi ayaa Qoorqoor ku eedeeyay ‘in uu fara-gelin ku hayo Doorashada Golaha Shacabka, isaga oo Odoyaasha dhaqanka ka dalbaday in ay soo gudbiyaan qeyb kamid ah Ergada, halka inta kalena uu isagu qorayo’. Hadalka Fiqi weli kama aysan Jawaabin Madaxtooyadda Galmudug. Wararkii u dambeeyay ayaa soo sheegaya in Ciidamo gadoodsan ay xireen waddooyinka qaar ee magaalada.
Previous articleUbax Tahliil oo dib ugu soo ceshatay lacagtii laaluushka ee Qoor Qoor ka qaatay? $300,000!!
Next articleQoor Qoor oo cabsi soo-wajahday dibna u dhigay doorashada 3dax kursi
(Xog) Dowlado ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta oo dalbaday shir deg...
Qalbidhagax: Waa iney ka Cudur Daartaan wixii Dhacay… ama ay Qaataan...